Ny fifandraisana eo anelanelan'ny fitaovana ivelan'ny kilalao ivelan'ny ankizy sy ny tontolo iainana | GFUN
Ny ankizy toy ny fanomezana dia tokony ho kilalao tsy kilalao, famolavolana mahaliana dia afaka mitondra fahasambarana tsy manam-petra ho an'ny zaza. Fitaovana kilalao ho an'ny ankizy Ny mpiara-miasa iray mahaliana sy mahafinaritra ny fitaovana filalaovana ankizy dia mety hiteraka loza ho an'ny ankizy. Isan-taona dia ankizy maherin'ny 100000 no voarohirohy amin'ny lozam-pifamoivoizana lehibe noho ny fitaovam-pilalaovan'ny ankizy ary mila miditra hopitaly izy ireo.
Noho izany, rehefa mifidy ny kilalao milalao ny ankizy dia ilaina ny manamarina tsy ny fitaovana filalaovana ihany, fa koa ny torolàlana fonosana. Ny fitaovam-pilalaovan'ny ankizy dia mety hanentana ny fahalianan'ny ankizy amin'ny fampitana fianarana amin'ny tontolo. Ny fitaovana filalaovana ivelany dia novolavolaina araka ny tontolo iainana ivelany.
Izy io dia manetsika ny tontolo iainana amin'ny endrika isan-karazany, mametraka ny fototry ny fitrandrahana mavitrika ny ankizy, ny fianarana mavitrika ary ny famahana olana. Ny fitomboan'ny zaza dia misy ifandraisany amin'ny tontolo iainana. Raha tsy matahotra ny ankizy iray dia tsy afaka miteny mafy be ianao. Tokony hikarakara azy ianao ary hampihatra ny herim-pony amin'ny tanjony. Amin'izao fotoana izao dia azonao atao ny manala azy milalao amin'ireo fitaovana fampiasa amin'ny ankizy. Satria ny fanatanjahan-tena ity dia fanatanjahantena feno, tsy ny hampivelatra ny firindran'ny zaza sy ny fahaizan'ny tanana ihany, fa koa mamela ny zaza mahery fo, avelao izy hanohitra hiatrika io olana io. Nanoro hevitra tamim-pitandremana ireo kilalao vy vy aho mba hilalao ny ankizy. Izy dia afaka manampy antsika hikarakara ny ankizy.
Nahatonga ahy hahatsapa koa fa mety amin'ny fanatanjahantena ankizy izany, tsy hoe hanofana tanjaka ara-batana ihany, fa mafy ihany koa ao am-poko. Ny zaza sasany dia teraka tsy sahy, tsy tokony hanery ny talentany ianao, mila mifehy azy ireo araka ny tokony ho izy, ary tokony hifoha tsara ny tananao. Rehefa milalao ny ankizy toy izany dia tia milalao karatra nefa tsy misy dikany ny heviny. Ohatra, tian'izy ireo mihemotra izy ireo. hihanika, satria dia mahasarotra kokoa, mahafa-po noho ny fahaizany azy. Amin'ity tranga ity, raha azo antoka fa milamina izy ireo, dia maimaimpoana milalao miaraka amin'ny fitaovana fihodinan'ny ankizy sasany izy ireo, izay afaka maneho ny fahaiza-mamorona.